सिंहदरबारकै जग्गा अतिक्रमणः किन मिचियो सिंहदरबार ? « Postpati – News For All
बैशाख १९, काठमाडौँ । ०४७ सम्म घट्टेकुलोबाट हनुमानस्थान पुग्ने सानो कुलो थियो । कुलोको डिलैडिल पैदल बाटो थियो ।
यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्ट र सुवास ढुंगानाले लेखेका हुन् । त्यहाँबाट भित्रपट्टि सिंहदरबारको पर्खाल थियो । सिंहदरबारबाहिर व्यक्तिका खेत थिए ।
सिंहदरबार गुरुयोजनाअन्तर्गत पूर्वतर्फ सडक बनाउँदा कुलोको डिलको बाटोलाई केन्द्र बनाएर दायाँबायाँ बराबरी जग्गा उपयोग हुनुपथ्र्यो । तर, सिंहदरबारभित्रै उच्च तहमा रहेका कर्मचारीको जग्गा पर्ने भएपछि उनीहरूले गुरुयोजना नै उल्ट्याउन लगाएर सिंहदरबारको मात्र जग्गा मिचे र सडक बनाए ।
१६ पुस ०४९ मा सरकारले गठन गरेको पूर्वसचिव रामबहादुर रावल संयोजकत्वको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बाटो विस्तारअघि सिट नं. ११०५÷२० कित्ता नं. ९७ मा ६९३ रोपनी ९ आना क्षेत्रफलमा सिंहदरबार परिसर फैलिएको थियो । तर, सिंहदरबारलाई च्यापेर सडक विस्तार गर्दा ४२ रोपनी ६ आना जग्गा बाटोमा प¥यो । बाटो विस्तार गर्दा सडकको दुवैतर्फ समान रूपमा विस्तार गर्नुपर्नेमा सिंहदरबारपट्टिको जग्गा मात्र काटियो । यसले सिंहदरबारको क्षेत्र खुम्चियो ।
२०७६ बैशाख १९,बिहीबार को दिन प्रकाशित